Tattoo Lavender: macnaha iyo ururinta naqshadaha | Tattoo
Tattoo Lavender: warshad la xiriirta bogsashada
Antonio Fdez | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Haddii aad ka fekereyso inaad xoog ku qabsato nooc ka mid ah ubax ama dhir, maqaalkani adiga ayuu xiiso kuu yeelan doonaa. The Tattoo lavender Iyagu waa nooc ka mid ah tattoo-ga oo aan caan ahayn oo aan joojinayn xiisihiisa. Ubaxa lavender-ku wuxuu leeyahay astaamo iyo astaamo lagu yaqaan adduunka intiisa badan, waana sababta ay uga mid tahay dhirta ugu caansan. Caannimo si tartiib tartiib ah ugu soo kordheysa adduunka farshaxanka jirka. Iyo tattoo gaar ahaan.
Oo ka waran qaabka iyo / ama naqshadeynta astaantan? Gudaha sawir muuqaal taas oo la socota maqaalkan aan u dooranay in aan samayno a Isugeynta Tattoo-ka Lavender oo ay ka wada siman yihiin xarrago, fudeyd iyo macaan. Tattoo-yada midabada yar leh ee loogu talagalay in lagu gudbiyo dareen gaar ah iyo xarrago. Way kufiican yihiin in lagu soo qabto jirka dumarka.
Haddaba, marka laga soo tago qaabka ay u sameysan yihiin ama farsamada uu u adeegsaday farshaxanka tatuuga inuu ku sameeyo tattoo ubax lavender ah, waa maxay macnahooda iyo astaantoodu? The Tattoo-lavender-ka wuxuu leeyahay macno aad u fiican. Waxay la xiriiraan bogsiinta illaa waqtiyadii hore, lavender waxaa loo isticmaali jiray dawada ka hortagga qaniinyada masaska. Lavender wuxuu kaloo la xiriiraa xusuusta.
Sidaa darteed, haddii aan rabno inaan helno tattoo lavender sida maamuus xubin qoyska ka mid ah ama qof aad jeceshahay, waxaan ku siin doonnaa warshaddan, ugu dambeyn, waxay ka dhigan tahay inaan soo gudbin doonno in xusuustaadu had iyo jeer nala joogto. Waa ikhtiyaar aad u xiiso badan oo ah sida tattoo loo xasuusto qof dhintay oo aan adduunkan ku sii jirin. Marka waxaan ka tagi doonnaa taatikada caadiga ah ee taariikhaha ama magacyada.
Sawirada Tattoos Lavender
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo Lavender: warshad la xiriirta bogsashada
Haweenka Tattooed: sheeko dhaqan iyo awoodsiin
Maxay gacmaha taatuuga u muuqdaan kuwo aad u xun?